Esports American Football - Myanmar Sports
🎁 ESPORTS AMERICAN FOOTBALL 🎁
Esports Bonus Calender ရဲ့ Esports American Football ပရိုမိုးရှင်းမှာ ပါဝင်ကစားပြီး
Esports American Football ပရိုမိုးရှင်းကတော့ တစ်သင်းကို ၁၁ ယောက်စီပါဝင်တဲ့ အသင်းနှစ်သင်း ယှဥ်ပြိုင်မယ့် အမေရိကန်ဘောလုံးပွဲစဥ်တွေမှာ လောင်းကြေးထပ် ကစားရမှာ ဖြစ်ပါ‌တယ်။
ပုံမှန်ပွဲကစားချိန်မှာ သရေရလဒ်နဲ့ ပြီးဆုံးသွားခဲ့ရင် အချိန်ပိုဆက်ကစားရမှာ ဖြစ်ပါ‌တယ်။ အလောင်းအစားအားလုံးကို အချိန်ပိုအပါအဝင် အတည်ပြုမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အလောင်းအစားများကို ပွဲမစတင်မီနဲ့ ပွဲစဉ်အတွင်း ( တိုက်ရိုက်အလောင်းအစားများ ) လက်ခံပါသည်။ ပွဲစဥ်အားလုံး တိုက်ရိုက်လွှင့်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ပရိုမိုးရှင်းကာလ ( 01. 06. 2022 – 02. 06. 2022 ) ( 03:30 – 03:29 )
ဒီပရိုမိုးရှင်းလေးကတော့ ၂၀၂၂ ခုနှစ် ဇွန်လ ၁ ရက်နေ့၊ မနက် ၃ နာရီ ၃၀ မိနစ် ( 01 June 2022 21:00 UTC ) ချိန်ကနေ ၂၀၂၂ ခုနှစ် ဇွန်လ ၂ ရက်နေ့၊ မနက် ၃ နာရီ ၂၉ မိနစ် ( 02 June 2022 20:59 UTC ) ချိန်အတွင်းသာ အကျုံးဝင်ပါတယ် ခင်ဗျ။
၄။ အခု ကမ်းလှမ်းချက် ( American Football 1xBet ) မှာ စာရင်းသွင်း (အကောင့်ဖွင့်) ထားသော ကတ်စတန်မာများသာ ပါဝင်နိုင်ပါသည်။ အောက်ပါ အချက်အလက်များကို ဖြည့်သွင်းထားရပါမည်။
၇။ အခု ပရိုမိုးရှင်း ( 1xBet Esports American Football ) တွင် ပါဝင်ခြင်းဖြင့် လူကြီးမင်းသည် ကမ်းလှမ်းချက်၏ စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များကို ဖတ်ပြီး လက်ခံကြောင်း အတည်ပြုပါသည်။
၁၀။ ဒီပရိုမိုးရှင်း ( 1xBet football promotion ) အတွက် အောက်ပါတစ်ခုစီတိုင်းလျှင် တစ်ကြိမ်သာ ရရှိနိုင်သည်။
၁၁။ တကယ်လို့ ကတ်စတန်မာ တစ်ဦးက ဤပရိုမိုးရှင်း၏ ရှုထောင့်တစ်ခုခုကို အလွဲသုံးစားပြုရန် သို့မဟုတ်၊ ကြိုးကိုင်ရန် ကြိုးပမ်းမှု သို့မဟုတ် ပရိုမိုးရှင်း စည်းမျဉ်းများကို ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်ကြောင်း တွေ့ရှိပါက ကုမ္ပဏီသည် ၎င်းကတ်စတန်မာ၏ ပရိုမိုးရှင်း ( 1xBet esports football promotion ) တွင် ပါဝင်ခြင်းကို ငြင်းပယ်ပိုင်ခွင့် ရှိပါသည်။
၁၄။ ပရိုမိုးရှင်းရဲ့ စည်းမျဉ်းများ ( terms american football ) ကို ပြောင်းလဲရန်၊ ပြိုင်ပွဲကို အချိန်မရွေး ဆိုင်းငံ့ရန် သို့မဟုတ် ဖျက်သိမ်းရန် ကျွန်တော်တို့ 1xBet ကုမ္ပဏီမှာ လုပ်ပိုင်ခွင့် ရှိပါသည်။